Iinkwenkwezi ezi-4 kwikhaya leholide e-SÖLVESBORG
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguElsa - DANCENTER
UElsa - DANCENTER unezimvo eziyi-396 zezinye iindawo.
IPukavik yindawo emnandi kakhulu yokuchitha iholide yakho; apha uya kuba kufutshane neelwandle ezintle, amathuba amahle okuloba kunye nokufikelela kwisikhephe. Ipatio ethandekayo yindawo ethandekayo yokuphumla okanye ukupheka isidlo kwi-grill, kunye nebhiya esandleni sakho okanye iglasi yewayini. Igumbi lokuhlala eliqaqambileyo nelimnandi. Nceda uqaphele ukuba indawo yomlilo ayinakusetyenziswa. Maninzi amathuba ohambo kule ndawo; ungathatha uhambo oluya Mörrum apho unokutyelela edumileyo & # 8220; indlu yesalmon & # 8221; ibekwe ecaleni komlambo iMörrumsån. Apha uya kufumana awona manzi okuloba angcono kwiBlekinge yonke, mhlawumbi nakwiSweden yonke. Kwezinye iindawo ungaya kwaye undwendwele iindawo ezintle zaseNogersund, eHällevik naseSandviken, nazo zonke iilwandle zazo ezintle. Ukuba undwendwela eKarlshamn ungonwabela usuku lokuthenga okanye undwendwele iKreativum eyindawo apho unokuzama khona ukulinga, ukwakha kunye nokufumanisa. EPukavik kukho amajikijolo amaninzi kunye neziqhamo. Isikhephe sifumaneka ngexesha lasehlotyeni okanye ekugqibeleni ngaphambili ngokwesivumelwano nomnini.
Uyilo: ikhitshi elivulekileyo (i-cooker(umbane), ihood, umatshini wekofu, imicrowave, ifriji-isikhenkcezisi), Igumbi lokuhlala/ibhedi (ibhedi egotywayo ephindwe kabini, iTV(isathelayithi, iziteshi zikamabonakude zaseJamani, ijelo leTV yaseSweden), unomathotholo), igumbi lokulala(2x Ibhedi eyodwa), igumbi lokulala(2x ibhedi eyodwa), igumbi lokuhlambela(igumbi lokufudumeza phantsi)(isitya sokuhlambela, ishawa, indlu yangasese, umatshini wokuhlamba), iterrace(ifanitshala yasegadini), impompo yomoya ukuya emoyeni
Umbuki zindwendwe ngu- Elsa - DANCENTER